Shufto badeed Soomaali ah oo dawaqsan oo lagu qabtey xeebaha wadanka Hindiya – SBC
Shufto badeed Soomaali ah oo dawaqsan oo lagu qabtey xeebaha wadanka Hindiya
Mudo ka yar 10 maalmood ayaa qaybtii labaad ee burcad badeed Soomaai ah oo dawaqsan waxay gudaha u galeen xeebaha wadanka Hindiya, kuwaasi oo ay gacnata ku dhigeen ciidamada badda ee dalkaasi.
18 nin oo Soomaali ah & sadex kale oo u kala dhashay wadamada Yemen & Tanzania oo la sheegay inay u qafaalnaayeen ayaa lagu qabtey xeebta magaalada dekada ah ee Dwarke ee ka tirsan gobolka Gujarat ee dalka Hindiya, waxaase ay sheegteen kooxdani in doonidii ay wateen ay cilad matoor ku timid.
Booliiska wadanka Hindiya ee deegaankaasi ayaa sheegay in 18-ka burcad badeeda Soomaalida ay afduub u qabsadeen dooni ay wateen labada nin ee Yemen u dhashay iyo ninka kale ee Tanzaaniyaanka ah, iyagoo doonidooda ay wateen ee kaluumaysiga u adeegsanayey inay ku afduubaan maraakiibta.
Dhacdadan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo 14 nin oo Soomaali ah oo lagu tuhunsan yahay burcad badeednimo ay gaareen xeebta deegaanka Una ee degmada Junagadh ee dalka Hindiya.
“21-ka ajaanibta lagu qabtey xeebta Dwarka, 18 ka mid ah waa Soomaali, laba waa Yemeniyiin, halna waa Tanzanian, waxaa kaloo aan qabanay doonidii ay wateen oo ay isku dayeyeen inay burcadnimo badeed ka geystaan badda” sidaasi waxaa yiri taliyaha police-ka Jamanagar Mr. Subhash Trivedi.
Mr. Subhash Trivedi wuxuu sheegay in ciidamada Booliiska gaar ahaan cutubka keydka ee badda ee loo yaqaan SRP oo ilaalo ka hayey xeebta Panchkui kuna dhaw magaalada Dwarka inay ka warheleen fariin ka timid dadka deegaanka oo sheegay inay halkaasi ku arkeen shufto badeedan, taasi oo keentey in ciidamadu ay soo qabtaan raggan.
“Intii aan ku jirnay baaritaanka, kuwa Soomaaliga ah waxay noo sheegeen in ay badda ku tuureen hubkii ay wateen oo uu ka mid ahaa garneylka garbaha laga tuuro ka dib markii xeebaha wadanka Cumaan ay ku joojisay diyaarad helicopter ay leeyihiin ciidamada NATO2 ayuu hadalkiisa ku sii kabay Trivedi.
“Waxay inoo sheegeen in diyaarada Helicoptar-ka NATO ay ilaalo ka haystey badda, iyagoo sheegay in cabsi ay ka qabeen in la qabto oo la xiro ay hubkoodii badda ugu qubeen” ayuu yiri Mr. Subhash Trivedi.
Mr. Subhash Trivedi wuxuu ku eedeeyey in kooxdan Soomaalida ah ay sidoo kale isku dayayeen inay bililiqaystaan dooni lagu magacaabo Moon oo gooshaysay badda, isagoo taasi ku macneeyey inay ka heleen intii ay baaritaanka ku wadeen kooxdaasi.
Sidoo kale Booliisku waxay xuseen in burcad badeedu ay u sheegeen in mudo 70 maalmood ah ay dul heehaabayeen biyaha badda Carabta.